Widgets စတော့ရှယ်ယာကိုးကား အွန်လိုင်းဂရပ်များ ကုန်ကျစရိတ်များ၏သမိုင်း Capitalization ခွဲဝေ အမြတ်အစွန်း ဝင်ငွေရရှိမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကနေဒါ ကြက်ဆင် ဂရိနိုင်ငံ ဂျာမနီ စင်္ကာပူ စပိန် ဆွီဒင် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ကိုရီးယား ထိုင်ဝမ် ထိုင်းနိုင်ငံ ဒိန်းမတ် နယူးဇီလန် နယ်သာလန် နော်ဝေ ပေါ်တူဂီ ပြင်သစ် ဖင်လန် ဘယ်လ်ဂျီယံ ဘရာဇီး မက္ကစီကို မလေးရှား ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ယူနိုက်တက်စတိတ် ရုရှားနိုင်ငံ သြစတြီးယား သြစတြေးလျ အက်စ်တိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အာဂျင်တီးနား အိန္ဒိယ အိုင်ယာလန် အီတလီ ဥရောပ AMS (အမ်စတာဒမ်ချိန်း) ASE (NYSE Market က (AMEX)) ASX (သြစတြေးလျစတော့အိတ်ချိန်း) ATH (အေသင်စတော့အိတ်ချိန်း) BER (ဘာလင်စတော့အိတ်ချိန်း) BRU (Euronext ဘရပ်ဆဲလ်) BSE (ဘုံဘေစတော့အိတ်ချိန်း) BTS (Bats ဂလိုဘယ်စျေးကွက်များ) BUE (Buenos Aires စတော့အိတ်ချိန်း) CNQ (CNQ) CPH (ကိုပင်ဟေဂင်စတော့အိတ်ချိန်း) DOH (DOH) DUS (Dusseldorf စတော့အိတ်ချိန်း) EBS (ဆွစ်ဇာလန်အီလက်ထရောနစ် Bourse) ENX (Euronext အနကျအဓိပ်ပါယျ) FRA (Frankfurt စတော့အိတ်ချိန်း) GER (XETRA စတော့အိတ်ချိန်း) HAM (ဟမ်းဘတ်) HAN (Hanover) HEL (ဟယ်လ်စင်ကီစတော့အိတ်ချိန်း) HKG (ဟောင်ကောင်စတော့အိတ်ချိန်း) ICE (ရေခဲပြင် Futures ဥရောပ) IOB (နိုင်ငံတကာအမိန့်စာအုပ်) ISE (အိုငျးရစျ) IST (အစ္စတန်ဘူလ်စတော့အိတ်ချိန်း) JKT (ဂျကာတာစတော့အိတ်ချိန်း) KLS (မလေးရှားဖလှယ်ရေး) KOE (KOSDAQ) KSC (ကိုရီးယားစတော့အိတ်ချိန်း) LIS (Euronext လစ္စဘွန်း) LIT (Lit) LSE (လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်း) MCE (မက်ဒရစ်စတော့အိတ်ချိန်း (ကြောင်)) MCX (မော်စကိုချိန်း (MOEX)) MEX (မက္ကစီကိုစတော့အိတ်ချိန်း) MIL (မီလန်စတော့အိတ်ချိန်း / Borsa Italia) MUN (မြူးနစ်) NAS (NASDAQ) NCM (NASDAQ) NGM (NASDAQ) NIM (NASDAQ GIDS) NMS (NASDAQ) NSI (NSE) NYQ (NYSE) NYS (NYSE) NZE (နယူးဇီလန်စတော့အိတ်ချိန်း) OBB (OTC သတင်းလွှာဘုတ်အဖွဲ့ Market က) OSL (အော်စလို Bors) PAR (Euronext ပဲရစ်) PCX (NYSE Arca) PNK (ပန်းရောင် Sheet များ) RIS (RIS) SAO (BOVESPA - စဝ် Paolo စတော့အိတ်ချိန်း) SES (စင်္ကာပူအိပ်ချိန်း) SET (ထိုင်းနိုင်ငံစတော့အိတ်ချိန်း) SHH (ရှန်ဟိုင်းစတော့အိတ်ချိန်း) SHZ (ရှန်ကျန်း) STO (စတော့ဟုမ်းစတော့အိတ်ချိန်း) STU (စတုဂတ်စတော့အိတ်ချိန်း) TAI (ထိုင်ဝမ်စတော့အိတ်ချိန်း) TAL (OMX ဘောလ်တစ်အိတ်ချိန်း - Talinn) TLO (Tlx ချိန်း) TOR (တိုရွန်တိုစတော့အိတ်ချိန်း) TWO (Taiwan OTC Exchange ) VAN (တိုရွန်တို Venture ချိန်း) VIE (ဗီယင်နာစတော့အိတ်ချိန်း) YHD (စက်မှုလုပ်ငန်း)
စတော့အိတ်ချိန်းငွေကြေးစနစ် USD - အမေရိကန်တဒေါ်လာ EUR - ယူရို GBP - ပေါင်စတာလင်ပေါင် JPY - ဂျပန်ယန်းငွေ CNY - ယွမ် RUB - ရုရှားရူဘယ် AUD - သြစတေးလျဒေါ်လာ AZN - အဘိဓါန် Azerbaijani manat ALL - အဘိဓါန် Albanian lek DZD - အယ်လ်ဂျီးရီးယား dinar XCD - ကာရစ်ဘီယံအရှေ့ဒေါ်လာစျေး AOA - kwanza MOP - အဘိဓါန် Macanese pataca ARS - အာဂျင်တီးနားပီဆို AMD - အဘိဓါန် Armenian DRAM AWG - Aruban florin AFN - အာဖဂန်အာဖဂန် BSD - Bahamian ဒေါ်လာစျေး BDT - ဘင်္ဂလားဒေ့ taka BBD - ဘာဘေးဒိုးစဒေါ်လာစျေး BHD - ဘာရိန်း dinar BYR - ဘီလာရုရူဘယ် BYN - ဘီလာရုရူဘယ် BZD - ဘေလီဇ်ဒေါ်လာ XOF - CFC ဖရန့် BMD - ဘာမြူဒါဒေါ်လာစျေး BGN - ဘူဂေးရီးယား lev BOB - ဘိုလီးဗီးယား boliviano BAM - ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားပြောင်းအမှတ်အသား BWP - ဘော့ဆွာနာ pula BRL - ဘရာဇီးကိုမှန်ကန် BND - ဘရူနိုင်းဒေါ်လာ SGD - စင်္ကာပူဒေါ်လာ BIF - ဘူရွန်ဒီဖရန့် BTN - ဘူတန် ngultrum INR - အိန္ဒိယရူပီး VUV - ဗာနူအာ vatu HUF - ဟနျဂရေီ forint VEF - ဗင်နီဇွဲလား Bolivar fuerte VND - Vietnamesse ဒေါင် XAF - CFC ဖရန့် HTG - အဘိဓါန် Haitian သခွားသီး GYD - ဂိုင်ယာနာဒေါ်လာစျေး GMD - Gambian dalasi GHS - ဂါနာ cedi GTQ - ဂွာတီမာလာ quetzal GNF - ဂီနီနိုင်ငံဖရန့် - - ဂါဇီးပေါင် GIP - ဂျီဘရောလ်ပေါင် HKD - ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ HNL - ဟွန်ဒူးရပ်စ် lempira GEL - ဂျြောဂြီယနျ lari DKK - ဒိနျးမတျပန်းဦးရစ်သရဖူကို DJF - ဂျီဘူတီနိုင်ငံဖရန့် DOP - ဒိုမီနီကန်ပီဆို EGP - အီဂျစ်ပေါင် ZMW - ဇမျဘီယာ kwacha MAD - အဘိဓါန် Moroccan dirham ZWD - ဇင်ဘာဘွေဒေါ်လာ ILS - အစ္စရေးအသစ်ကျပ် IDR - အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ JOD - ယော်ဒန်မြစ် dinar IQD - အီရတ် dinar IRR - အီရန် rial ISK - အိုက်စလန်ခရိုဏာ YER - ယီမင် rial CVE - ကိပ်ဗာဒီ escudo KZT - ကာဇက်စတန် Teng KYD - ကေမန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ KHR - ကမ္ဘောဒီးယား riel CAD - ကနေဒါဒေါ်လာ QAR - ကာတာ riyal KES - ကင်ညာခှ COP - ကိုလံဘီယာပီဆို KMF - Comoran ဖရန့် CDF - ကွန်ဂိုဖရန့် KPW - မြောက်ကိုရီးယားဝမ် KRW - တောင်ကိုရီးယားဝမ် RSD - ဆားဗီး dinar CRC - ကော်စတာရီကာအူမကြီး CUP - ကျူးဘားပီဆို KWD - ကူဝိတ် dinar NZD - နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ KGS - Kyrgyzstani som LAK - လာအို Kip LVL - LAT အံ LSL - loti ZAR - Rand LRD - လိုင်ဘေးရီးယားဒေါ်လာစျေး LBP - လက်ဘနွန်ပေါင် LYD - လစ်ဗျား dinar LTL - အာနီယံ litas CHF - ဆွစ်ဖရန် MUR - မောရစ်ရှရူပီး MRO - Mauritanian ouguiya MGA - အာလာဂါစီ ariary MKD - Macedonian အဘိဓါန် denar MWK - မာလာဝီ kwacha MYR - Malaysin ရင်းဂစ် MVR - Maldivian rufiyaa MXN - မက္ကဆီကန်ပီဆို MZN - မိုဇမ်ဘစ် metical MDL - မော်လ်ဒိုဗာ leu MNT - လီး tugrik MMK - မြန်မာကျပ်ငွေ NAD - နမ်မီးဘီးယားဒေါ်လာစျေး NPR - နီပေါရူပီး NGN - နိုင်ဂျီးရီးယား naira ANG - Antilliaanse gulden NIO - နီကာရာဂွါ cordoba XPF - ပြင်သစ်ပစိဖိတ်ဖရန့် NOK - နော်ဝေခရိုဏာ AED - ယူအေအီး Dirham OMR - အိုမန် rial SHP - စိန့်ဟယ်လီနာပေါင် PKR - ပါကစ္စတန်ရူပီး PAB - ပနားမား balboa PGK - kina PYG - ဂူအာရာနီ PEN - ပီရူး Nuevo sol PLN - ပိုလနျ zloty RWF - ရဝမ်ဒါဖရန့် RON - အဘိဓါန် Romanian leu XDR - SDR (အထူးဆွဲအခွင့်အရေးများ) SVC - ဆာလ်ဗေးဒိုးအူမကြီး WST - Tala STD - စဝ်တုန်နှင့်ပရ dobra SAR - ဆော်ဒီ riyal SZL - lilangeni TRY - နယူးတူရကီလိုင်ရာ SCR - Seychelles ရူပီး SYP - ဆီးရီးယားပေါင် SKK - စလိုဗကျ koruna SBD - ဆော်လမွန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ SOS - ဆိုမာလီခှ SDG - ဆူဒန်ပေါင် SRD - ဆူရာနမ်ဒေါ်လာစျေး SLL - Leone TJS - Tajikistani somoni THB - ထိုင်းဘတ်ငွေ TWD - ထိုင်ဝမ်အသစ်ဒေါ်လာစျေး TZS - တန်ဇန်းနီးယားခှ TOP - pa`anga TTD - ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုဒေါ်လာစျေး TND - တူနီးရှား dinar TMM - တာ့ခ်မင်နစ္စတန် manat TMT - တာ့ခ်မင်နစ္စတန်အသစ် manat UGX - ယူဂန်ဒါနိုင်ငံခှ UZS - ဥဇဘက်ပေါင်းလဒ် UAH - hryvnia UYU - ဥရုဂွေးပီဆို FJD - ဖီဂျီဒေါ်လာစျေး PHP - ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို FKP - ဖောက်ကလန်ကျွန်းစုပေါင် HRK - -Croatian Kuna အဘိဓါန် CZK - ခကျြခကျြ koruna CLP - ချီလီပီဆို SEK - ဆွီဒင်ခရိုနာ LKR - သီရိလင်္ကာရူပီး ERN - nakfa ETB - အဲသယောပိ birr JMD - Jamaican ဒေါ်လာစျေး SSP - ဆူဒန်တောင်ပိုင်းပေါင် BTC - Bitcoin CLF - ချီလီ Unidad က de Fomento EEK - Estonian အဘိဓါန် kroon GGP - ဂါဇီးပေါင် IMP - အဘိဓါန် Manx ပေါင် JEP - ဂျာစီပေါင် MTL - မောလ် lira XAG - Troy ငွေအောင်စ XAU - Troy အောင်စရွှေ / အီလက်ထရောနစ်ရွှေကို) ZMK - ဇမျဘီယာ kwacha ZWL - ဇင်ဘာဘွေဒေါ်လာ ATS - သြစတြီးယားခှ AON - အင်ဂိုလာသစ်ကို kwanza BEF - ဘယ်လဂျီယံဖရန့် GRD - ဂရိတဲ IEP - အိုငျးရစျပေါင် ESP - စပိန် peseta ITL - အီတလီ Lire CYP - ဆိုက်ပရပ်စ်ပေါင် DEM - Deutsche အမှတ်အသား NLG - နယ်သာလန် guilder PTE - ပေါ်တူဂီ escudo SIT - စလိုဗေးနီး tolar SRG - ဆူရာနမ် guilder FIM - တောင်အမှတ်အသား FRF - ပြင်သစ်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ECU - , ECU YUM - ယူဂိုစလပ်အသစ် dinar
1. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Jasmine Telecom Systems Public Company Limited သမိုင်း
JTS-R.BK 165.50 ฿ +24.91 % ↑ +139.86 % ↑ +8 475.13 % ↑ +12 069.10 % ↑
2. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Simplex Papers Limited သမိုင်း
SIMPLXPAP.BO 40.75 Rs -0.64 % ↓ +156.13 % ↑ +3 780.95 % ↑ +1 804.21 % ↑
3. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Cosmo Ferrites Limited သမိုင်း
COSMOFE.BO 421.45 Rs +78.50 % ↑ +175.37 % ↑ +3 502.14 % ↑ +2 379.12 % ↑
4. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Radhe Developers (India) Limited သမိုင်း
RADHEDE.BO 273.20 Rs +2.30 % ↑ +111.29 % ↑ +2 969.66 % ↑ +1 721.33 % ↑
5. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sawaca Business Machines Limited သမိုင်း
SAWABUSI.BO 25.30 Rs +138.23 % ↑ +589.37 % ↑ +2 680.22 % ↑ +3 463.38 % ↑
6. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Xpro India Limited သမိုင်း
XPROINDIA.NS 1 011.25 Rs +6.46 % ↑ +77.33 % ↑ +2 351.52 % ↑ +2 568.21 % ↑
7. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Banas Finance Limited သမိုင်း
BANASFN.BO 113.50 Rs +95.35 % ↑ +490.22 % ↑ +2 299.58 % ↑ +3 142.86 % ↑
8. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ TTI Enterprise Limited သမိုင်း
TTIENT.BO 37.85 Rs -0.26 % ↓ +23.90 % ↑ +2 180.12 % ↑ +2 457.43 % ↑
9. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Jainco Projects (India) Limited သမိုင်း
JAINCO.BO 12.49 Rs +74.69 % ↑ +236.66 % ↑ +2 170.91 % ↑ +1 543.42 % ↑
10. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ritesh Properties and Industries Ltd သမိုင်း
RPIL.BO 433 Rs -0.12 % ↓ +39.86 % ↑ +1 961.90 % ↑ +3 282.81 % ↑
11. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Panafic Industrials Limited သမိုင်း
PANAFIC.BO 4.23 Rs +92.27 % ↑ +1 013.16 % ↑ +1 914.29 % ↑ +560.94 % ↑
12. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Natura Hue Chem Limited သမိုင်း
NATHUEC.BO 9.51 Rs +18.14 % ↑ +517.53 % ↑ +1 840.82 % ↑ +90.20 % ↑
13. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Pan India Corporation Limited သမိုင်း
PANINDIAC.BO 10.34 Rs +59.57 % ↑ +720.64 % ↑ +1 780 % ↑ +5 070 % ↑
14. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ National Standard (India) Limited သမိုင်း
NATIONSTD.BO 10 166 Rs -0.0679 % ↓ +7.51 % ↑ +1 758.49 % ↑ +42 170.10 % ↑
15. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Chennai Ferrous Industries Limited သမိုင်း
CHENFERRO.BO 98.50 Rs -0.0524 % ↓ -0.54 % ↓ +1 613.04 % ↑ +1 514.75 % ↑
16. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PMC Fincorp Limited သမိုင်း
PMCFIN.BO 8.24 Rs +59.07 % ↑ +357.78 % ↑ +1 581.63 % ↑ +2 188.89 % ↑
17. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Kreon Finnancial Services Limited သမိုင်း
KREONFIN.BO 66.75 Rs -0.13 % ↓ +91.26 % ↑ +1 489.29 % ↑ +914.44 % ↑
18. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Automotive Stampings and Assemblies Limited သမိုင်း
ASAL.NS 526.55 Rs -0.0272 % ↓ +529.84 % ↑ +1 476.50 % ↑ +884.21 % ↑
19. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Modella Woollens Limited သမိုင်း
MODWOOL.BO 172.25 Rs +7.49 % ↑ +680.83 % ↑ +1 417.62 % ↑ +1 631.16 % ↑
20. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Gita Renewable Energy Limited သမိုင်း
GITARENEW.BO 150.65 Rs -0.28 % ↓ -0.47 % ↓ +1 406.50 % ↑ +2 913 % ↑
21. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Moongipa Securities Limited သမိုင်း
MOONGIPASEC.BO 33.50 Rs +21.16 % ↑ +114.33 % ↑ +1 356.52 % ↑ +758.97 % ↑
22. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Adinath Textiles Limited သမိုင်း
ADINATH.BO 45.60 Rs -0.35 % ↓ +30.10 % ↑ +1 320.56 % ↑ +1 588.89 % ↑
23. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Globus Power Generation Limited သမိုင်း
GLOBUSCON.BO 72.60 Rs -0.15 % ↓ -0.00343 % ↓ +1 290.80 % ↑ +937.14 % ↑
24. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ruttonsha International Rectifier Ltd. သမိုင်း
RIR.BO 491.30 Rs +191.83 % ↑ +511.07 % ↑ +1 282 % ↑ +1 123.66 % ↑
25. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Patidar Buildcon Limited သမိုင်း
PATIDAR.BO 10.47 Rs -0.0966 % ↓ +30.06 % ↑ +1 277.63 % ↑ +262.28 % ↑
26. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Blue Water Ventures International, Inc. သမိုင်း
BWVI 0.40 $ +8.34 % ↑ +146.15 % ↑ +1 255.93 % ↑ +67.36 % ↑
27. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PT Perdana Bangun Pusaka Tbk သမိုင်း
KONI.JK4310 Rp +342.05 % ↑ +363.44 % ↑ +1 246.88 % ↑ +1 124.43 % ↑
28. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ushdev International Limited သမိုင်း
USHDI.BO 4.70 Rs -0.0675 % ↓ +59.86 % ↑ +1 242.86 % ↑ +840 % ↑
29. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Indian Infotech and Software Limited သမိုင်း
INDINFO.BO 7.46 Rs +7.34 % ↑ +360.49 % ↑ +1 232.14 % ↑ +3 826.32 % ↑
30. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Jindal Poly Investment and Finance Company Limited သမိုင်း
JPOLYINVST.BO 378.05 Rs +37.92 % ↑ +124.50 % ↑ +1 214.96 % ↑ +917.63 % ↑
31. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Rohit Ferro-Tech Limited သမိုင်း
ROHITFERRO.NS 34.45 Rs -0.0199 % ↓ +112 % ↑ +1 200 % ↑ +2 053.12 % ↑
32. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk သမိုင်း
TMAS.JK 1 660 Rp +20.73 % ↑ +406.10 % ↑ +1 176.92 % ↑ +115.58 % ↑
33. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Glotech Industrial Corp. သမိုင်း
5475.TWO 27.55 $ -0.23 % ↓ +0.18 % ↑ +1 169.59 % ↑ +327.80 % ↑
34. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Vegetable Products Limited သမိုင်း
VEGETABLE.BO 47.70 Rs +136.49 % ↑ +1 101.51 % ↑ +1 148.69 % ↑ +844.55 % ↑
35. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sindhu Trade Links Limited သမိုင်း
SINDHUTRAD.BO 973.70 Rs +56.44 % ↑ +120.07 % ↑ +1 145.14 % ↑ +660.11 % ↑
36. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Shivansh Finserve Limited သမိုင်း
SHIVA.BO 9.94 Rs +43.85 % ↑ +220.65 % ↑ +1 127.16 % ↑ +269.52 % ↑
37. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ CMO Public Company Limited သမိုင်း
CMO.BK 10.40 ฿ +85.71 % ↑ +385.98 % ↑ +1 123.53 % ↑ +676.12 % ↑
38. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ ISF Limited သမိုင်း
ISFL.BO 6.85 Rs +26.38 % ↑ +14.36 % ↑ +1 123.21 % ↑ +1 751.35 % ↑
39. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Continental Chemicals Limited သမိုင်း
CONTCHM.BO 179.90 Rs -0.20 % ↓ -0.52 % ↓ +1 115.54 % ↑ +1 887.85 % ↑
40. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Jindal Photo Limited သမိုင်း
JINDALPHOT.BO 349.85 Rs +34.84 % ↑ +64.64 % ↑ +1 112.65 % ↑ +1 174.50 % ↑
41. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Octal Credit Capital Limited သမိုင်း
OCTAL.BO 56.85 Rs +8.60 % ↑ +8.18 % ↑ +1 112.15 % ↑ +373.75 % ↑
42. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Virtual Global Education Limited သမိုင်း
VIRTUALG.BO 2.29 Rs +19.90 % ↑ +316.36 % ↑ +1 105.26 % ↑ +717.86 % ↑
43. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Asante Gold Corporation သမိုင်း
ASGOF 1.03 +14.97 % ↑ -0.09057 % ↓ +1 062.81 % ↑ +2 909.80 % ↑
44. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ushakiran Finance Limited သမိုင်း
USHAKIRA.BO 42.75 Rs -0.0138 % ↓ +422.62 % ↑ +1 061.68 % ↑ +894.19 % ↑
45. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Mangalam Industrial Finance Limited သမိုင်း
MANGIND.BO 8.15 Rs +48.45 % ↑ +96.39 % ↑ +1 031.94 % ↑ +1 409.26 % ↑
46. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sanrhea Technical Textiles Ltd. သမိုင်း
SANTETX.BO 99 Rs +28.66 % ↑ +24.76 % ↑ +1 017.38 % ↑ +294.42 % ↑
47. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Odyssey Corporation Limited သမိုင်း
ODYCORP.BO 12.71 Rs +18.23 % ↑ +158.33 % ↑ +1 014.91 % ↑ +730.72 % ↑
48. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sharp Investments Limited သမိုင်း
SHARPINV.BO 4.90 Rs +58.06 % ↑ +345.46 % ↑ +1 013.64 % ↑ +1 784.62 % ↑
49. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ M.K. Exim (India) Limited သမိုင်း
MKEXIM.BO 248.55 Rs -0.0188 % ↓ +179.43 % ↑ +980.65 % ↑ +4 563.23 % ↑
50. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Cressanda Solutions Limited သမိုင်း
CRESSAN.BO 5.18 Rs -0.28 % ↓ +149.04 % ↑ +979.17 % ↑ +412.87 % ↑
51. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Kaiser Corporation Limited သမိုင်း
KACL.BO 6.57 Rs +184.42 % ↑ +1 163.46 % ↑ +977.05 % ↑ +185.65 % ↑
52. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Kiduja India Limited သမိုင်း
KIDUJA.BO 220.30 Rs -0.24 % ↓ +15.70 % ↑ +961.69 % ↑ +704.02 % ↑
53. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tata Teleservices (Maharashtra) Limited သမိုင်း
TTML.NS 165.30 Rs -0.0268 % ↓ +197.57 % ↑ +959.62 % ↑ +4 308 % ↑
54. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Master Trust Limited သမိုင်း
MASTERTR.BO 225.85 Rs +51.93 % ↑ +104.30 % ↑ +940.78 % ↑ +399.67 % ↑
55. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Indo Thai Securities Ltd. သမိုင်း
INDOTHAI.BO 348.05 Rs +19.98 % ↑ +231.63 % ↑ +934.32 % ↑ +1 189.07 % ↑
56. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Kkalpana Plastick Limited သမိုင်း
KKPLASTICK.BO 23 Rs +5.75 % ↑ +8.75 % ↑ +926.79 % ↑ +334.78 % ↑
57. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sheetal Diamonds Limited သမိုင်း
SHEETAL.BO 10.62 Rs -0.061 % ↓ -0.63 % ↓ +921.15 % ↑ +125.96 % ↑
58. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ MFL India Limited သမိုင်း
MFLINDIA.BO 2.41 Rs +107.76 % ↑ +473.81 % ↑ +864 % ↑ +1 168.42 % ↑
59. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ SC Agrotech Limited သမိုင်း
SCAGRO.BO 10.75 Rs +76.81 % ↑ -0.12 % ↓ +859.82 % ↑ +175.64 % ↑
60. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Smiths & Founders (India) Limited သမိုင်း
SMFIL.BO 8.25 Rs +8.98 % ↑ +95.96 % ↑ +859.30 % ↑ +837.50 % ↑
61. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Natraj Proteins Limited သမိုင်း
NATRAJPR.BO 170.05 Rs -0.14 % ↓ +121.13 % ↑ +844.72 % ↑ +431.41 % ↑
62. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Lloyds Metals and Energy Limited သမိုင်း
LLOYDSME.BO 117.80 Rs +39.82 % ↑ +27.90 % ↑ +843.91 % ↑ +861.63 % ↑
63. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Available Finance Limited သမိုင်း
AVAILFC.BO 113.50 Rs +39.18 % ↑ +65.94 % ↑ +843.48 % ↑ +1 175.28 % ↑
64. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Addi Industries Limited သမိုင်း
ADDIND.BO 39.90 Rs +30.39 % ↑ +184.39 % ↑ +834.43 % ↑ +398.75 % ↑
65. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Steel Strips Infrastructures Limited သမိုင်း
STLSTRINF.BO 40.75 Rs +10.28 % ↑ +15.93 % ↑ +830.37 % ↑ +449.93 % ↑
66. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ema India Limited သမိုင်း
EMAINDIA.BO 22.30 Rs +26.35 % ↑ +57.37 % ↑ +821.49 % ↑ +31.18 % ↑
67. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ankit Metal & Power Limited သမိုင်း
ANKITMETAL.NS 12.05 Rs -0.0243 % ↓ +197.53 % ↑ +792.59 % ↑ +2 310 % ↑
68. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PT Panca Global Kapital Tbk. သမိုင်း
PEGE.JK 1 115 Rp -0.0785 % ↓ -0.23 % ↓ +784.92 % ↑ +522.91 % ↑
69. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ LWS Knitwear Limited သမိုင်း
LWSKNIT.BO 19.35 Rs +2.38 % ↑ -0.13 % ↓ +767.71 % ↑ +304.81 % ↑
70. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Daulat Securities Limited သမိုင်း
DAULAT.BO 45.45 Rs +131.30 % ↑ +101.11 % ↑ +762.43 % ↑ +378.42 % ↑
71. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Omansh Enterprises Limited သမိုင်း
OMANSH.BO 2.93 Rs +109.29 % ↑ +121.97 % ↑ +761.77 % ↑ +221.98 % ↑
72. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Chandra Prabhu International Ltd. သမိုင်း
CHANDRAP.BO 213.35 Rs +75.38 % ↑ +47.85 % ↑ +753.40 % ↑ +1 225.16 % ↑
73. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Lesha Industries Limited သမိုင်း
LESHAIND.BO 6.69 Rs +7.04 % ↑ +15.54 % ↑ +746.84 % ↑ -0.38 % ↓
74. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Clio Infotech Limited သမိုင်း
CLIOINFO.BO 11.22 Rs -0.0328 % ↓ +230 % ↑ +743.61 % ↑ +412.33 % ↑
75. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Goldstone Technologies Limited သမိုင်း
GOLDTECH.BO 75.70 Rs -0.18 % ↓ +116.91 % ↑ +733.70 % ↑ +500.79 % ↑
76. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ NUVISTA ENERGY LTD. သမိုင်း
NVG.BE 5.65 € +20.21 % ↑ +35.82 % ↑ +730.88 % ↑ +106.20 % ↑
77. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Moongipa Capital Finance Limited သမိုင်း
MONGIPA.BO 21.90 Rs +41.84 % ↑ +98.19 % ↑ +726.42 % ↑ +513.45 % ↑
78. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ The Environmental Group Limited သမိုင်း
EGL.AX 0.26 $ +6.25 % ↑ +41.67 % ↑ +722.58 % ↑ +390.39 % ↑
79. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Nahar Spinning Mills Ltd သမိုင်း
NAHARSPING.BO 609.30 Rs +21.84 % ↑ +26.56 % ↑ +715.12 % ↑ +600.35 % ↑
80. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Mini Diamonds (India) Limited သမိုင်း
MINID.BO 23.70 Rs +12.80 % ↑ +106.09 % ↑ +711.64 % ↑ +451.16 % ↑
81. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Trishakti Electronics & Industries Limited သမိုင်း
TRISHAKT.BO 56.60 Rs +16.94 % ↑ +31.78 % ↑ +697.18 % ↑ +197.90 % ↑
82. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ J.J. Finance Corporation Limited သမိုင်း
JJFINCOR.BO 45.15 Rs -0.51 % ↓ +216.84 % ↑ +696.30 % ↑ +58.98 % ↑
83. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Orient Green Power Company Limited သမိုင်း
GREENPOWER.BO 19.15 Rs +17.20 % ↑ +321.81 % ↑ +694.61 % ↑ +283.77 % ↑
84. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ P.H. Capital Limited သမိုင်း
PHCAP.BO 146.55 Rs +17.85 % ↑ +101.03 % ↑ +692.16 % ↑ +807.43 % ↑
85. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ UltraChip Inc. သမိုင်း
3141.TWO 182 $ -0.31 % ↓ -0.13 % ↓ +691.30 % ↑ +389.91 % ↑
86. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd. သမိုင်း
LEENEE.BO 19.25 Rs -0.0881 % ↓ +269.48 % ↑ +682.52 % ↑ +1 218.49 % ↑
87. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Culturecom Holdings Limited သမိုင်း
0343.HK 0.72 $ -0.13 % ↓ -0.0137 % ↓ +674.19 % ↑ +136.07 % ↑
88. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Advanced Lithium Electrochemistry (Cayman) Co., Ltd. သမိုင်း
5227.TWO 83.50 $ +0.60 % ↑ +135.88 % ↑ +666.06 % ↑ +377.14 % ↑
89. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ NuVista Energy Ltd. သမိုင်း
NUVSF 6.31 $ +16.74 % ↑ +32.29 % ↑ +661.71 % ↑ +95.96 % ↑
90. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ S. E. Power Limited သမိုင်း
SEPOWER.NS 34.60 Rs -0.12 % ↓ +234.30 % ↑ +660.44 % ↑ +668.89 % ↑
91. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Minaxi Textiles Limited သမိုင်း
MINAXI.BO 4.28 Rs +57.93 % ↑ +229.23 % ↑ +650.88 % ↑ +529.41 % ↑
92. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Bihar Sponge Iron Limited သမိုင်း
BIHSPONG.BO 12.82 Rs +24.95 % ↑ +32.58 % ↑ +649.71 % ↑ +942.28 % ↑
93. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Netlink Solutions (India) Limited သမိုင်း
NETLINK.BO 104.05 Rs +50.36 % ↑ +144.25 % ↑ +649.10 % ↑ +863.43 % ↑
94. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Alka India Limited သမိုင်း
ALKA.BO 4.58 Rs +75.48 % ↑ +353.47 % ↑ +638.71 % ↑ +2 310.53 % ↑
95. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Prakash Steelage Limited သမိုင်း
PRAKASHSTL.BO 6.64 Rs +15.68 % ↑ +163.49 % ↑ +637.78 % ↑ +1 912.12 % ↑
96. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tiger Logistics (India) Limited သမိုင်း
TIGERLOGS.BO 262.65 Rs +53.73 % ↑ +77.89 % ↑ +635.71 % ↑ +108.54 % ↑
97. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Baroda Extrusion Limited သမိုင်း
BAROEXT.BO 5.33 Rs -0.0935 % ↓ +67.61 % ↑ +630.14 % ↑ +1 232.50 % ↑
98. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PT Bank Harda Internasional Tbk သမိုင်း
BBHI.JK5650 Rp -0.18 % ↓ -0.0544 % ↓ +629.03 % ↑ +3 147.13 % ↑
99. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Shivalik Bimetal Controls Limited သမိုင်း
SHBCLQ.BO 447.20 Rs +27.55 % ↑ +53.49 % ↑ +623.63 % ↑ +323.08 % ↑
100. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ JCT Limited သမိုင်း
JCTLTD.BO 6.46 Rs +3.36 % ↑ +95.76 % ↑ +617.78 % ↑ +271.26 % ↑
101. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ RH PetroGas Limited သမိုင်း
T13.SI 0.18 $ +16.23 % ↑ -0.0821 % ↓ +616 % ↑ +167.16 % ↑
102. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ USG Tech Solutions Limited သမိုင်း
USGTECH.BO 14.03 Rs +14.16 % ↑ +27.66 % ↑ +615.82 % ↑ +242.20 % ↑
103. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ FCS Software Solutions Limited သမိုင်း
FCSSOFT.BO 6.18 Rs +32.90 % ↑ +354.41 % ↑ +610.35 % ↑ +2 709.09 % ↑
104. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Lyka Labs Limited သမိုင်း
LYKALABS.BO 190.75 Rs -0.20 % ↓ +107 % ↑ +609.11 % ↑ +693.14 % ↑
105. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tatia Global Vennture Limited သမိုင်း
TATIAGLOB.BO 4.17 Rs +5.04 % ↑ +61 % ↑ +606.78 % ↑ +1 245.16 % ↑
106. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Haria Exports Limited သမိုင်း
HARIAEXPO.BO 7.05 Rs +11.02 % ↑ +69.47 % ↑ +605 % ↑ +865.75 % ↑
107. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Gujarat Credit Corporation Limited သမိုင်း
GUJCRED.BO 27.95 Rs +166.19 % ↑ +261.58 % ↑ +604.03 % ↑ +182.32 % ↑
108. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ NCL Research & Financial Services Limited သမိုင်း
NCLRESE.BO 2.31 Rs +43.48 % ↑ -0.18 % ↓ +600 % ↑ +541.67 % ↑
109. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ SPEL Semiconductor Limited သမိုင်း
SPELS.BO 81.70 Rs +114.72 % ↑ +249.89 % ↑ +592.37 % ↑ +833.71 % ↑
110. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Capital Engineering Network Public Company Limited သမိုင်း
CEN.BK 3.84 ฿ +12.94 % ↑ +45.45 % ↑ +585.71 % ↑ +276.47 % ↑
111. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PT Arthavest Tbk သမိုင်း
ARTA.JK 1 905 Rp -0.0841 % ↓ +5.54 % ↑ +585.25 % ↑ +66.38 % ↑
112. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tinna Rubber and Infrastructure Limited သမိုင်း
TINNARUBR.BO 281.35 Rs +55.79 % ↑ +131.18 % ↑ +584.55 % ↑ +545.30 % ↑
113. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ GCM Capital Advisors Limited သမိုင်း
GCMCAPI.BO 8.40 Rs +59.09 % ↑ +122.81 % ↑ +577.42 % ↑ +265.22 % ↑
114. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Lotus Chocolate Company Limited သမိုင်း
LOTUSCHO.BO 126.05 Rs +31.51 % ↑ +154.90 % ↑ +572.27 % ↑ +446.86 % ↑
115. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Taaza International Limited သမိုင်း
TAAZAINT.BO 20 Rs -0.0888 % ↓ -0.63 % ↓ +564.45 % ↑ +150.31 % ↑
116. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Elango Industries Limited သမိုင်း
ELANGO.BO 13.85 Rs +69.11 % ↑ +92.90 % ↑ +559.52 % ↑ +313.43 % ↑
117. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tantia Constructions Limited သမိုင်း
TANTIACONS.BO 13.70 Rs -0.55 % ↓ +105.09 % ↑ +555.50 % ↑ +218.61 % ↑
118. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ HAICHANG OCEA.P.H.DL-0001 သမိုင်း
0HO.BE 0.30 € -0.0443 % ↓ +37.27 % ↑ +549.46 % ↑ +76.61 % ↑
119. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Megasoft Limited သမိုင်း
MEGASOFT.BO 69.50 Rs +1.02 % ↑ +285.04 % ↑ +548.32 % ↑ +845.58 % ↑
120. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ecoboard Industries Limited သမိုင်း
ECOBOAR.BO 26.20 Rs -0.0542 % ↓ +28.43 % ↑ +545.32 % ↑ +991.67 % ↑
121. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Thomas Scott (India) Limited သမိုင်း
THOMASCOTT.NS 41.90 Rs -0.13 % ↓ +138.07 % ↑ +544.62 % ↑ +451.32 % ↑
122. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Megri Soft Limited သမိုင်း
MEGRISOFT.BO 158.80 Rs -0.0727 % ↓ -0.11 % ↓ +535.20 % ↑ +1 207 % ↑
123. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Global Offshore Services Limited သမိုင်း
GLOBOFFS.BO 57.35 Rs +11.68 % ↑ +19.98 % ↑ +530.91 % ↑ +309.94 % ↑
124. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tips Industries Limited သမိုင်း
TIPSINDLTD.BO2326.65 Rs +36.68 % ↑ +57.46 % ↑ +530.70 % ↑ +3 768.08 % ↑
125. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Citizen Infoline Limited သမိုင်း
CIL.BO 23.81 Rs +185.49 % ↑ +276.15 % ↑ +529.89 % ↑ +482.15 % ↑
126. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Faze Three Limited သမိုင်း
FAZE3Q.BO 344.80 Rs +25.59 % ↑ +12.57 % ↑ +527.48 % ↑ +716.10 % ↑
127. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sinco Pharmaceuticals Holdings Limited သမိုင်း
6833.HK 1.62 $ -0.14 % ↓ +62 % ↑ +523.08 % ↑ +332 % ↑
128. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Vishnu Chemicals Limited သမိုင်း
VISHNU.BO 1 060 Rs +28.73 % ↑ +34.68 % ↑ +519.88 % ↑ +703.03 % ↑
129. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Hittco Tools Limited သမိုင်း
HITTCO.BO 21.06 Rs +99.05 % ↑ +363.88 % ↑ +519.41 % ↑ +513.99 % ↑
130. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sam Industries Limited သမိုင်း
SAMINDUS.BO 60 Rs +41.84 % ↑ +143.41 % ↑ +517.92 % ↑ +481.40 % ↑
131. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sanjivani Paranteral Limited. သမိုင်း
SANJIVIN.BO 63.50 Rs +119.34 % ↑ +140.53 % ↑ +517.70 % ↑ +1 078.11 % ↑
132. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ HB Stockholdings Limited သမိုင်း
HBSTOCK.BO 57.40 Rs +52.46 % ↑ +59.89 % ↑ +516.54 % ↑ +609.52 % ↑
133. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ South Asian Enterprises Limited သမိုင်း
SAENTER.BO 41.05 Rs +24.21 % ↑ +43.03 % ↑ +516.37 % ↑ +1 125.37 % ↑
134. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ P.T. Bank Bumi Arta Tbk သမိုင်း
BNBA.JK2630 Rp -0.26 % ↓ +73.60 % ↑ +514.49 % ↑ +806.90 % ↑
135. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ramgopal Polytex Limited သမိုင်း
RAMGOPOLY.BO 12.88 Rs -0.0667 % ↓ +1.50 % ↑ +513.33 % ↑ +356.74 % ↑
136. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Beeyu Overseas Ltd. သမိုင်း
BEEYU.BO 4.75 Rs +181.07 % ↑ +343.93 % ↑ +508.97 % ↑ +1 219.44 % ↑
137. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Visagar Financial Services Limited သမိုင်း
VISAGAR.BO 6.64 Rs -0.0391 % ↓ +370.92 % ↑ +503.64 % ↑ +2 113.33 % ↑
138. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Destination XL Group, Inc. သမိုင်း
DXLG 4.51 $ -0.19 % ↓ -0.28 % ↓ +501.33 % ↑ +73.46 % ↑
139. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Genesys International Corporation Limited သမိုင်း
GENESYS.BO 377.75 Rs +27.90 % ↑ +64.20 % ↑ +498.65 % ↑ +179.09 % ↑
140. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ashram Online.com Limited သမိုင်း
ASHRAM.BO 8.50 Rs +19.21 % ↑ +45.30 % ↑ +498.59 % ↑ +102.38 % ↑
141. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ India Finsec Limited သမိုင်း
IFINSEC.BO 44.90 Rs +76.29 % ↑ +187.82 % ↑ +496.28 % ↑ +49.67 % ↑
142. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Surat Textile Mills Limited သမိုင်း
SURATEX.BO 23.30 Rs +10.22 % ↑ +152.17 % ↑ +495.91 % ↑ +642.04 % ↑
143. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ BAYTEX ENERGY CORP. သမိုင်း
B5X.BE 3.18 € +24.57 % ↑ +12.19 % ↑ +495.14 % ↑ +124.23 % ↑
144. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Mahavir Industries Limited သမိုင်း
MAHAVIRIND.BO 3.44 Rs +90.06 % ↑ +209.91 % ↑ +493.10 % ↑ +221.50 % ↑
145. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tong Hua Holding Public Company Limited သမိုင်း
TH-R.BK 2.82 ฿ +2.92 % ↑ +5.22 % ↑ +487.50 % ↑ +286.30 % ↑
146. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ CIL Nova Petrochemicals Limited သမိုင်း
CNOVAPETRO.BO 46.05 Rs +34.65 % ↑ +95.96 % ↑ +487.37 % ↑ +91.48 % ↑
147. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ ASIX Electronics Corporation သမိုင်း
3169.TWO 206 $ -0.28 % ↓ +23.35 % ↑ +486.90 % ↑ +586.67 % ↑
148. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Applied Energetics, Inc. သမိုင်း
AERG 2.11 $ -0.19 % ↓ -0.12 % ↓ +486.11 % ↑ +2 871.83 % ↑
149. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Pasari Spinning Mills Limited သမိုင်း
PASARI.BO 8.26 Rs +15.20 % ↑ +112.34 % ↑ +485.82 % ↑ +104.96 % ↑
150. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ CGX Energy Inc. Registered Shar သမိုင်း
GXCN.SG 1.68 € +1.82 % ↑ +79.68 % ↑ +483.33 % ↑ +522.22 % ↑
151. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ India Steel Works Limited သမိုင်း
ISWL.BO 4.37 Rs +18.43 % ↑ +207.75 % ↑ +482.67 % ↑ +231.06 % ↑
152. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Richa Industries Limited သမိုင်း
RICHAIND.BO5Rs +19.05 % ↑ +106.61 % ↑ +481.40 % ↑ +165.96 % ↑
153. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Complete Logistic Services Berhad သမိုင်း
5136.KL 3.83 RM +51.98 % ↑ +74.89 % ↑ +480.30 % ↑ +447.14 % ↑
154. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ IT CITY Public Company Limited သမိုင်း
IT.BK 13.40 ฿ -0.19 % ↓ +84.83 % ↑ +477.59 % ↑ +276.41 % ↑
155. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ NCL International Logistics Public Company Limited သမိုင်း
NCL-R.BK 4.60 ฿ +27.07 % ↑ +17.95 % ↑ +475 % ↑ +210.81 % ↑
156. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Cátenon, S.A. သမိုင်း
COM.MC 1.92 € +8.47 % ↑ +71.43 % ↑ +474.85 % ↑ +270.66 % ↑
157. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Indowind Energy Limited သမိုင်း
INDOWIND.BO 24 Rs -0.28 % ↓ +108.51 % ↑ +470.07 % ↑ +366.02 % ↑
158. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Mega Corporation Limited သမိုင်း
MEGACOR.BO 4.54 Rs +52.35 % ↑ +257.48 % ↑ +467.50 % ↑ +1 064.10 % ↑
159. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Katare Spinning Mills Limited သမိုင်း
KATRSPG.BO 86.85 Rs +149.57 % ↑ +303.02 % ↑ +461.77 % ↑ +892.57 % ↑
160. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Khoobsurat Limited သမိုင်း
KHOOBSURAT.BO 1.06 Rs +152.38 % ↑ +360.87 % ↑ +457.90 % ↑ +457.90 % ↑
161. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Petrus Resources Ltd. သမိုင်း
PTRUF 1.14 $ +67.20 % ↑ +79.19 % ↑ +455.96 % ↑ +171.82 % ↑
162. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Sadhana Nitro Chem Limited သမိုင်း
SADHNANIQ.BO 122.90 Rs +173.72 % ↑ +215.53 % ↑ +454.85 % ↑ -0.81 % ↓
163. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Suryavanshi Spinning Mills Limited သမိုင်း
SURYVANSP.BO 22.05 Rs +20.03 % ↑ +83.75 % ↑ +454.02 % ↑ +348.17 % ↑
164. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Tong Kee (Holding) Limited သမိုင်း
8305.HK 0.32 $ +66.67 % ↑ +86.39 % ↑ +452.63 % ↑ +160.33 % ↑
165. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Baytex Energy Corp. သမိုင်း
BTE.TO 4.47 $ +22.13 % ↑ +10.37 % ↑ +451.85 % ↑ +106.94 % ↑
166. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Athabasca Oil Corporation သမိုင်း
ATHOF 1.02 $ +4.62 % ↑ +27.50 % ↑ +451.35 % ↑ +38.55 % ↑
167. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Golkunda Diamonds & Jewellery Limited သမိုင်း
GOLKUNDIA.BO 95 Rs +10.92 % ↑ +16.42 % ↑ +450.73 % ↑ +716.15 % ↑
168. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Mishtann Foods Limited သမိုင်း
MISHTANN.BO 32.25 Rs +87.50 % ↑ +56.55 % ↑ +448.47 % ↑ -0.13 % ↓
169. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Vani Commercials Limited သမိုင်း
VANICOM.BO 12.30 Rs -0.22 % ↓ +178.91 % ↑ +446.67 % ↑ +80.88 % ↑
170. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Comfort Commotrade Limited သမိုင်း
COMCL.BO 24.70 Rs +69.76 % ↑ +91.47 % ↑ +442.86 % ↑ +488.10 % ↑
171. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Meenakshi Enterprises Limited သမိုင်း
MEL.BO 15.20 Rs -0.12 % ↓ +44.90 % ↑ +442.86 % ↑ +334.29 % ↑
172. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Jindal Worldwide Limited သမိုင်း
JINDWORLD.NS 323.85 Rs +56.30 % ↑ +142.58 % ↑ +441.10 % ↑ +353.25 % ↑
173. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Cardinal Energy Ltd. သမိုင်း
C0Y.F 3.62 € +25.69 % ↑ +13.84 % ↑ +440.30 % ↑ +166.18 % ↑
174. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Bhagawati Oxygen Limited သမိုင်း
BHAGWOX.BO 73.15 Rs +59.54 % ↑ +100.41 % ↑ +437.87 % ↑ +277.06 % ↑
175. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. သမိုင်း
BIMA.JK 268 Rp +18.58 % ↑ +30.10 % ↑ +436 % ↑ +396.30 % ↑
176. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Adarsh Plant Protect Limited သမိုင်း
ADARSHPL.BO 18.95 Rs +44 % ↑ +116.32 % ↑ +433.80 % ↑ +293.15 % ↑
177. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Svam Software Limited သမိုင်း
SVAMSOF.BO 10.29 Rs +7.30 % ↑ +175.87 % ↑ +433.16 % ↑ +1 533.33 % ↑
178. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Almondz Global Securities Limited သမိုင်း
ALMONDZ.NS 106.30 Rs -0.16 % ↓ -0.18 % ↓ +432.83 % ↑ +326.91 % ↑
179. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Maris Spinners Limited သမိုင်း
MARIS.BO 88.50 Rs +14.56 % ↑ +50.13 % ↑ +431.53 % ↑ +73.36 % ↑
180. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ H P Cotton Textile Mills Limited သမိုင်း
HPCOTTON.BO 179.25 Rs +6.47 % ↑ +72.85 % ↑ +431.11 % ↑ +384.46 % ↑
181. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ PTC Industries Limited သမိုင်း
PTCIL.BO4375.70 Rs -0.18 % ↓ +63.78 % ↑ +431.03 % ↑ +993.38 % ↑
182. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ HAMMONIA Schiffsholding AG သမိုင်း
HHX.HM 260 € +8.33 % ↑ +50.29 % ↑ +430.61 % ↑ +482.96 % ↑
183. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Gayatri BioOrganics Limited သမိုင်း
GAYATRIBI.BO 23.75 Rs +53.72 % ↑ +146.88 % ↑ +430.13 % ↑ +919.31 % ↑
184. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Nandan Denim Limited သမိုင်း
NDL.NS 146.75 Rs +30.39 % ↑ +82.07 % ↑ +429.78 % ↑ +155.66 % ↑
185. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Vertex Securities Limited သမိုင်း
VERTEX.BO 4.18 Rs +46.67 % ↑ +77.12 % ↑ +429.11 % ↑ +132.22 % ↑
186. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Ramky Infrastructure Limited သမိုင်း
RAMKY.NS 227.50 Rs +11.88 % ↑ +57.33 % ↑ +427.84 % ↑ +82.44 % ↑
187. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Jayaswal Neco Industries Limited သမိုင်း
JAYNECOIND.BO 29.95 Rs +22 % ↑ +5.46 % ↑ +427.29 % ↑ +511.23 % ↑
188. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Fortune International Limited သမိုင်း
FORINTL.BO 66.75 Rs +11.90 % ↑ +46.86 % ↑ +427.25 % ↑ +510.15 % ↑
189. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Luharuka Media & Infra Limited သမိုင်း
LUHARUKA.BO 3.58 Rs +153.90 % ↑ +250.98 % ↑ +426.47 % ↑ +528.07 % ↑
190. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Shah Alloys Limited သမိုင်း
SHAHALLOYS.NS 50 Rs -0.01088 % ↓ +79.86 % ↑ +426.32 % ↑ +160.42 % ↑
191. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Unistar Multimedia Limited သမိုင်း
UNISTRMU.BO 14.10 Rs +0.21 % ↑ -0.10 % ↓ +426.12 % ↑ +297.18 % ↑
192. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ K.P. Energy Limited သမိုင်း
KPEL.BO 343.65 Rs +45.46 % ↑ +196.12 % ↑ +425.86 % ↑ +63.57 % ↑
193. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Huayu Expressway Group Limited သမိုင်း
1823.HK 3.41 $ +18.40 % ↑ -0.19 % ↓ +424.62 % ↑ +441.27 % ↑
194. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ ACI Infocom Limited သမိုင်း
ACIIN.BO 1.99 Rs +37.24 % ↑ +37.24 % ↑ +423.68 % ↑ +215.87 % ↑
195. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ MosChip Semiconductor Technology Limited သမိုင်း
MOSCHIP.BO 82.45 Rs -0.0599 % ↓ +78.46 % ↑ +423.49 % ↑ +292.62 % ↑
196. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ TRC Construction Public Company Limited သမိုင်း
TRC-R.BK 0.47 ฿ +17.50 % ↑ +123.81 % ↑ +422.22 % ↑ +4.44 % ↑
197. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Haichang Ocean Park Holdings Ltd. သမိုင်း
2255.HK 2.82 $ -0.03093 % ↓ +41 % ↑ +422.22 % ↑ +71.95 % ↑
198. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ FGP Limited သမိုင်း
FGP.BO 8.82 Rs +161.72 % ↑ +281.82 % ↑ +421.89 % ↑ +539.13 % ↑
199. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ United Alloy-Tech Company Ltd သမိုင်း
3162.TWO 45.55 $ -0.0173 % ↓ -0.001096 % ↓ +418.79 % ↑ +116.39 % ↑
200. စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၏ Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited သမိုင်း
PXI.F 0.47 € -0.26 % ↓ +4.95 % ↑ +417.78 % ↑ +232.86 % ↑
ကုမ္ပဏီများ၏စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများသမိုင်းသည်အတိတ်ကာလကအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသော allstockstoday.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အပိုင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်းဆိုင်ရာကိုးကားခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်အတွက်ယခင်ကစတော့စျေးနှုန်းများ၏တန်ဖိုးများကိုပြသခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီများ၏စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဇယားတစ်ခုတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီအတွက်သမိုင်းဆိုင်ရာစတော့ရှယ်ယာအချက်အလက်များ၏အကျဉ်းချုပ်ဇယားတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအချိန်ကာလအတွင်းစတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုတစ်လမှ ၃ နှစ်အထိပြသသည်။
ကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်း၏သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပိုမိုအသေးစိတ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရွေးပြီး၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှု၏နောက်စာမျက်နှာတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်သောသမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများမှယူပြီးယနေ့ကမ္ဘာ့အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ရှိသည့်ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးနှင့်ကိုက်ညီသည်။
ယနေ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တွေ့နိုင်သောစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ စတော့အိတ်အွန်လိုင်းကိုးကား
လွန်ခဲ့သောတစ်လကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုအရောင်းအ ၀ ယ်မှလိုချင်သောနေ့အတွက်ရရှိသည်။
လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းသည်လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကထိုနေ့၌ပင်ကုမ္ပဏီစတော့အိတ်ချိန်းတစ်ခု၏ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကတည်းကသမိုင်းကြောင်းအရကိုးကားထားသော allstockstoday.com ၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်မှတ်မိသည်
လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်အရကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာများ၏ဒိုင်းနမစ်ကိုတွက်ချက်ရန်အတွက်စာရင်းကိုင်တန်ဖိုးထက် ပို၍ ရည်ညွှန်းသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများ၏စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တည်ငြိမ်မှုကဲ့သို့သောဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုမိုနားလည်မှုပေးသည်နှင့်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။